Bajaajle lagu dilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Bajaajle lagu dilay Muqdisho
Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda fedaraalka ayaa waddada maka al mukarama ku toogtay mid ka mid ahaa wadayaaasha bajaajyada Caasimadda.
MUQDISH, Soomaaliya - Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa isgoyska KM4 ee Muqdisho ku dilay bajaajle. Askariga oo saarnaa gaari Cabdi Bile ah ayaa rasaas huwiyay mootada uu watay ruuxa geeriyooday.
Ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilkan uu askariga u geystay wiilka dhallinyarada ah, si nabad ah ayayna meeshii dilka uga dhaqaaqeen dilaaga iyo kolonyadii la socotay.
Dilkan loo geystay wiilka bajaajlaha ah ayaa qeyb ka ah dilal dhowr ah oo lagula kaco dhallinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta.